Hanaraka iny lalan’i Kadhafi iny i Andry Rajoelina – MyDago.com aime Madagascar
Hanaraka iny lalan’i Kadhafi iny i Andry Rajoelina
Tonga tsy tapaka teto amin’ny kianjan’ny Magro ny vahoaka sy ny mpitarika, teny an-toerana ihany koa ny mydago nandray ny sary sy ny soratra, koa dia entinay aminao ireto ny tatitr’ izany :
Ignace :tsy mahomby ny FAT, nitondra an’i Madagasikara anaty lavaka. Vola sy seza ary henatra sy tahotra sisa no mbola hijanonan’ireo ao ary efa miteny daholo. Samy miandry sy mijery ny fihetsikin’ny vahoaka sisa. Manomboaka mahatsapa daholo mantsy fa fahadisona ilay fanovana. Tsy misy ianteherana intsony ireo FAT ireo.
Ary inona indray ity resaka 4 ème session io ? Indroa no ara-dalana fa domelina toy ny rainy ny zanany. Noho ny adalanao Rajoelina no nisaoran’i Kadhafi anao hoe misaotra nanakana ilay sommet tany aminareo ka lasa anay. Miara miala daholo no mendrika any ireo.
Guy Maxime :tatitry ny amerikana raha resaka politika 5% no mbola bitro voalavo, 15% tsy miteny ny heviny ary 75% mbola Dada ihany ary resaka sosialy tena mijaly ny vahoaka mandinika syantonyara-pivelomanana.
Lalàna tapahanareo 100% ve dia verenana dinihana afaka herinandro, tena foza inareo ary kitotoa tanteraka ny ataonareo. Chargé d’Etat ahoana ianao ? Ministra fantome ianao, tsy tafiditra ao anatin’ny budget de l’Etat sy loi des finanaces. Ronstant , mpanolon-tsaim-paritry Ihorombe dia nilaza fa ny fianakaviam-be iraisampirenenano niteny fa tsy izy Saddam Hussein, manaraka i Kadhafi ary tsy ho ela Andry Rajoelina.Ny zavatra marina tenenitsika miverimberina eto herintaona aty aoriana vao misy mahatakatra.Taraherintaona foana ny FAT.
Tsianihy :any Toliary dia mbola misy mpianatra tsy hita hatramin’izao. Rehefa hoe hampinatra demokrasia tany i Mémé dia nijojo ny orana ka lena ny fianarana ary rava izany. Tara herintaona hatrany tokoa ny FAT ary ilay directoire militairetara3 taona ka ho nofinofy satria mihemotra ary tsy mahasoa ny vahoaka ny ataonareo be kintana sy be bokotra. Rehefa mitsoaka i Andry dia any. Tongava fa hisy vaovao goavana amin’ny Sabotsy.
Mektoub : tsy misy tsy miloa-bava amin’ny zavatra miseho eto amin’ny firenena.Taratokoa vao mahatsapa zavatra ny FAT ary ireo olona marivo salosana dia lasa nandray ilay sambo mbola tsy mandeha. Tena miady anatiny anefa ireo ankehitriny ary izy samy izy no mifanembaka. Dobo-drano tsikelikely ary manavotra aina sisa ny ao anatiny.
Aza atao fanontaniana intsony ilay hoe hiverina ve i Dada, ny mpanapaka no hanatitra azy eto ary raha mbola be fanahiana ianao, marina fa mamoaka Magro ny gazety fa tsy ampy ireny ka tongava maneho mivantana.
Ny be kintana aza milaza eto fa tsy izy ny FAT ka mbola hanao inona any i Vital ? Fambolena krizy vaovao ny directoire militaire na hanimpy baolina aza i Andry
Nampatsiahy ny maha-zavadehibe ny hetsika amin’ny Sabotsy ho avy izao ny depioté Zafilahy : “tena goavana io amin’ny Sabotsy io, koa tongava maro. Eto Antananarivo no fotoana hanaovana ilay sonia fa tsy any Nosy Be ary mba miara taitra amin’ny rehetra ry Grad Iloafo sa dia efa tonta loatra ka dia miesona ? Tsy ny ankolafy 3 sy ny rodobe ary ny vahoaka maro an’isa no tsy manaiky any i Andry intsony fa ny sehatra iraisam-pirenena mantajaka toy nyUE,USA izay milaza mihitsy fa raha mbola i Andry no eo 0 $. Samihafa ny tranga Cote d’Ivoire sy Madagasikara, aza ampitovina ny lakana sy sambo na samy mandeha amin’ny rano aza. Ny lohanareo no mikorontana fa tsy ny tany.
Misy fifanarahanareo frantsay sy maorisiana amin’I Andry mihitsy matoa ianareo mifikitra mafy amin’io rafitra tsy ara-dalana io.
ary mazava ny lalantsika.
Kadhafi et son protégé Andry Rajoelina
Auteur Solo Razafy*Publié le 24 août 2011 24 août 2011 Catégories Politique
5 pensées sur “Hanaraka iny lalan’i Kadhafi iny i Andry Rajoelina”
Io indray ireto ilan’afo tsy hirehitra fa hitanila lava eo!mahay miaro ny rambony ery ireo
rehefa misy zavatra ho ketrehany izay! mampalahelo !dia mba hanao inona eo hono ??
miesona marina ireto iloafo ireto ! mba mitady hirika fa dia mamalan-kira foana raha vao mba miseho,tsy ao mihintsy!
Nanao ts’inonts’inona olona anie izany Khadafi izay e!izao sisa no niafarany! mbola ho avy koa ny an’i domelina fa sao
mitetika ny ho afa maina eo lavasanga!
25 août 2011 à 9 h 10 min
Saika hadinoko. Coordinateur TGV aty @ Commune Rurale ato amin’ny ex Province Tuléar aho saingy hitako fa hitondra any an-kady ity lalam-poza ity dia aleoko manomana ny fahatongavan’ny Dada sitrany ahay mahazo roa. Na dia mazava be aza fa ho ringana ity taranam-poza ity.
toetsaina inona koa ity mba ho entinao eto ry AndrySerge?Rehefa hi tanao fa ho rendrika domelina
ka laninao ny volany dia hialanao izany izy? dia handady aty @ vahoaka efa niady sy niaritra ny mafy
nadritry ny 2 taona mahery noho ny NAFITSOKAREO? dia ho MANDRY VE NY HARITRERITRAO @’izany??? ianao izany ilay
« mitady tany malemy hanorenam-pangady »!
Sao dia mba ho votsi-droa no tokony ho sahaza anao fa tsy ny HANAN-DROA araka ny heritreritrao??sao dia diso tafahoatra loatra
ity fitiavan-tenanao ry Andry?Toa MORAMORAINA ery izato izy! mampalahelo ny toetsaina toy izao !Mba mandinia tena aloha ary mba
manaova toa an’i MANOELA!na dia nigadrany tsy fidiny teny tsiafahy aza dia DADA!DADA!DADA ihany!
Aoka hazava ny resaka fa raha resy i KADHAFI !dia jereo tsara fa ny mpitolona dia
LEHILAHY sy TANORA mirijarija avokoa,fa ny antsika dia ny vehivavy no betsaka fa
raha tsy ireo vehivavy ireo aza dia efa tsy teo intsony i MAGRO.Dia mbola jereo tsara ihany koa fa dia ny
LEHILAHY no MPAMADIKA PALITAO eo foana .Mampalahelo ilay fitiavan-tenan’ny lehilahy GASY fa gasy
eto no resahana an! miala tsiny fa misy zavatra tsy maintsy tokony ho lazaina fa tena tsy misy izany hoe
mba FINIAVANA izany eo @ lehilahy GASY aleo lazaiko mihintsy hoe@ hakapobeny, ny vehivavy foana no
betsaka eo dia lalaovin’i foza fotsiny !tsy rarahiany! satria ny vehivavy ihany no tena mahatsapa ilay olana
mitranga ao an-trano angamba.Eny mety hoe : miasa koa angaha ny lehilahy !fa na izany aza ! isanandro
na andro fety na andavanadro dia vehivavy no betsaka eo @ Magro eo na hetsika hafa koa ivelan’i eo.
Azo atao ny manonofy……
Raha nidaboka i Ben Ali , Mboubarak na i Kadhafi …dia ny FOKONOLONA MANONTOLO no nahay niara-mivondro
Misaraka = fasika
AIZA INTSIKA RY MALAGASY Ô !
Précédent Article précédent : Tsy mahatoky tena intsony ny FAT
Suivant Article suivant : Du nouveau chez les autres entités politiques…